Apple Watch marka la barbar dhigo Gear S2 muuqaal ahaan | Wararka IPhone
Iyadoo Apple Watch ay jabisay suuqa smartwatch tan iyo bishii Febraayo ee la soo dhaafay, tartanku wuxuu horey u qaatay waqti si loo bilaabo badeecad lala barbardhigi karo muuqaalka android. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, Samsung ayaa maalmo kahor ka soo muuqatay IFA adduunka oo tusaya midka noqonaya smartwatch-kooda ugu fiican wali.
Farqiga ugu weyn ee ay Qalabka Geerida S2 marka loo eego Apple Watch waa qaabkeeda wareegsan. Ma jiraan wax laga qoray dhadhanka, sidaa darteed qaar baa ka heli doona muuqaalka saacad wareegsan oo gacanta ka mid ah kuwa ka sii fiicanna kuwa kalena waxay dooran doonaan inay doortaan nooca laba jibbaaran, haddii la siiyay fursad ay ku doortaan mid ama tan kale.
Dhamaadka iyo qalabka Gear S2 ayaa naga dhigaya inaan aragno in Samsung ay ugu dambeyntii qaadatay dariiqa saxda ah ee siinta alaabteeda si dhab ah "qiimo" taabasho, waddo ka bilaabatay sanadkan Galaxy S6 iyo S6 Edge. Xaqiiqdii waxaa jira waxyaabo dhiirrigelin ah oo ku jira Apple Watch si ay u fuliyaan saacaddan, sida xargaha la is-weydaarsado, qaabka dhijitaalka ah ee lagu dhex maro barnaamijyada kala duwan ama astaamaha nidaamka, laakiin runtu waxay tahay in Samsung ay shaqo fiican ku qabatay qalabkan. .
Fiidiyowgan isbarbardhigga ah waxaad ku arki kartaa sida ay u egyihiin marka la barbar dhigo midba midka kale iyo astaamaha waxqabadka guud ee nidaamka. Sida laga soo xigtay ilo wareedyo, Gear S2 wuxuu noqon karaa cnaxariis leh mustaqbalka iPhone, marka maalinta ay u badan tahay inay timaado markaan dooran karno midkee aan rabno inaan soo iibsano si aan ula jaanqaado iPhone-keena. Keebaad dooran lahayd?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Apple Watch iyo vs. Gear S2, isbarbardhiga fiidiyowga
Aniga aragtidayda iyo macnaheedu maahan inay run tahay, waxaan dareemayaa in Apple Watch ay leedahay qalab tayo sare leh iyo nidaam hawleed dheeri ah, laga yaabee inaysan lahayn batteriga iyo shaashadda ugufiican, laakiin maahan inaad daawato a filim ku yaal saacad…
Javier Sanjorge (@AbdisalanProff) dijo
SAMSUNG GEAR S2 waa TIZEN, maahan Android.
Jawaab Javier Sanjorge (@javitxusan)
Waxay iga dhigeysaa wax lagu qoslo, maxaa yeelay "xarkaha la isku beddeli karo" Apple ma abuurin, horay ayey u jireen.
Waxay ila tahay aniga in labada dhinacba ay jiraan wax cusub, oo aad u wanaagsan.
Ajajajajajaj sidee u qosol badan yahay qofka qoray maqaalka in uu ku bilaabo, ha ii sheegin in saacada Apple ay jabisay suuqa ilaa Febraayo maxaa yeelay waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee la iibiyay waxaana cad in Samsung Galaxy gear 2 uu aad uga fiican yahay saacada Apple, runtu waxay tahay inay sii daayeen saacadii Apple ee nuqul ka ahayd Samsung ayna isku dayeen inay lacag helaan
Ku jawaab antifanboys
Waxaan ku doortaa Gear S2 3G oo leh GPS, waana sababta kaliya ee aanan u iibsan Apple Watch, maxaa yeelay ma haysto GPS, ah! Iyo waliba maxaa yeelay ma haysto shahaadada IP68, ee Gear S2 sameeyo, iyo sidoo kale haa Waxaan ku darnaa inay leedahay batteri badan iyo keyd fiican oo ka fiican sidii hore.
Waxaan rabay in aan iraahdo "Aniga ayaa doorta", furihii waan waayey!
Saacadda tufaaxa, haddii aan si sax ah u xasuusto, ma soo bixin Febraayo, laakiin waxay ahayd 10-kii Abriil, in kasta oo aysan billaabin inay gaarto kuwii ugu horreeyay ee iibsada illaa 24-kii Abriil oo keliya Mareykanka.
Ninkani waa been abuur, anigu waxaan ahay antifanboys-ka dhabta ah!, Waxaana kaliya oo aan doonayaa inaan caddeeyo in Apple WALIGAA aysan bixin tirooyinka iibka rasmiga ah ee saacaddiisa, marka loo eego sababaha istiraatiijiyadeed ee wajiga tartanka, sidaa darteed waxay hubaal ahayd Fashilmay, oo ay si fiican adiga kuugu socoto, si ay u helaan wax soo saar ka wanaagsan kana jaban.
PS "Antfanboys run ah ma daabaco in Apple ay ku jirto 5-ta iib ee ugu sareysa, wayna sii yaraaneysaa marka aysan run aheyn maxaa yeelay lama oga."
Antifanboys-ka runta runta ah (iyo haa, waxaan iibsan doonaa Gear S2, taasi waa waxa cunuggu saxay)
Hay'adda xayeysiinta waxay Apple weydiisaneysaa inay soo wacdo iPhone-ka soo socda iPhone iPhone 7